ပင်စိမ်းနဲ့ ချက်ကြမယ် – Basil | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ပင်စိမ်းနဲ့ ချက်ကြမယ် – Basil
ပင်စိမ်းနဲ့ ချက်ကြမယ် – Basil
Posted by ဇီဇီ on Aug 4, 2017 in Food, Drink & Recipes, Society & Lifestyle |6comments
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က သတင်းစာဖတ်လိုက်တော့ ပင်စိမ်းအကြောင်းတွေ့တာနဲ့ ပင်စိမ်းချက်နည်းစုပေးမယ်ဆိုပြီး ရွာထဲလှည့်ရှာလိုက်တာ ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း ရဲ့ ကြက်ပင်စိမ်းလေးသွားတွေ့တယ်။
ကြက်ပင်စိမ်း ( ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း)
ဒယ်အိုးထဲသို့ ဆီအနည်းငယ်ထည့်၍ဆီပူလာလျှင် အချိုအငံနယ်ထားသော် ကြက်သားနှင့်ပဲသီးစိမ်းကိုထည့်၍ အသားအညှိရောင်သမ်းလာလျှင် အိုးထဲမှခဏဖယ်ထားလိုက်ပါ
နောက်ထပ်ဆီ အနည်းငယ်ထည့်၍ ကြက်သွန်ဖြူကိုဆီသပ်လိုက်ပါ
ထိုင်းတွေကတော့ အချိုမှုန့်မစားတော့ သကြားပဲသုံးပါတယ်
ပြီးလျှင် အရသာနဲ့အနံပြည့်စုံသော ပင်စိမ်းကြက်သားဟင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
အာ့နဲ့ ဆက်ရှာလိုက်တာ မေဖလားဝါးရဲ့ ငါးပင်စိမ်းချဉ်စပ်ဟင်းလေးသွားတွေ့ရော။
မိုးအေးအေးမှာ အရည်စပ်စပ် ချဉ်ငန်စပ် ငါးဟင်းလေးနဲ့ ဆိုတော့ခံတွင်းတွေ့မှာ သေချာပါတယ်နော်..။ဆီပြန်တွေ၊ အကြော်ဟင်းတွေ စားရတာအီလာလို့ရင်လည်း ဒီလိုဟင်းလေးတစ်ခွက်က ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ပြည့်စုံ၊ အဟာရလည်း ပြည့်စုံပြီး ထမင်းစားမိန်မှာ ကျိန်းသေပါပဲလို့…။
ငါး ၃၀သား ခန့်
ကြက်သွန်နီ ဥကြီး သုံးဥ
ကြက်သွန်ဖြူ ၈ မွှာ
မရမ်းပြားခြောက် =ဆယ်ပြားခန့် ( မရှိပါက ဟင်းကျက်သွားမှ သံပုရာသီး တစ်လုံးခန့်အရည်ညှစ်ထဲ့ပါ)
ငံပြာရည် ( ထမင်းစားဇွန်းနဲ့ နှစ်ဇွန်းခန့်)
ဆီ ( တမင်းစားဇွန်းနှင့် တစ်ဝက်ခန့်) မထဲ့ပဲချက်ပါကလည်း ရပါတယ်။
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် ( ကော်ဖီဇွန်း တစ်ဇွန်း)
ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ကို နှုတ်နှုတ်စင်းထားပါ။
ပြီးတော့ ငရုတ်သီးတောင့်တွေကို ပါးပါးလှီး၊ ဖက်ဖယ်ရွက် တစ်ဝက်၊ ရှမ်းနံနံ တစ်ဝက်၊ ပင်စိမ်းတစ်ဝက် ဆီကို နှုတ်နှုတ်လှီးထားပါ။
မရမ်းပြားကို လည်းလှီးထားပါ( မရမ်းပြားမရှိပါက ဟင်းအိုးချခါနီးမှ သံပုရာသီးတစ်လုံးခန့်ကို အရည်ညှစ်ထဲ့လိုက်လို့လည်း ရပါတယ်)
ပြီးနောက် အနေတော်တုံးထားသော ငါးထဲသို့ ငံပြာရည် ၊ ဆားနနွင်း၊ ဟင်းခတ်မှုန့် ဆီအနည်းငယ်၊ နှင့် လှီးထားစင်းထားသော ကြက်သွန်နီ၊ဖြူ၊ မရမ်းပြား၊ ရှမ်းနံနံ၊ ဖက်ဖယ်ရွက်၊ ပင်စိမ်းရွက် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့် ၊ ငရုတ်သီးမှုန့် စသည့်ပါဝင်ပစ္စည်း အားလုံးကို အိုးထဲတွင် နှံသည်အထိရော နယ်ပါ.။
ပြီးမှ လုံးရေအနည်းငယ်ထဲ့ကာ ချက်ထားလိုက်ပါ၊၊
ငါးများမကြေသွားစေရန် ဖြေးဖြေးလေး အိုးကိုလှုတ်ပေးပါ
ငါးများကို ရောနယ်ကတည်းက အရသာက၀င်သွားပြီးဖြစ်သောကြောင့် မမွှေပဲ ဖြေးဖြေးလေးလှုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုရေ ခမ်းပါက ကိုယ်လိုသလောက်ရေ
အချိန်အဆ ထပ်ထဲ့ကာ ပြန်ချက်ပေးပါ။
ထိုရေဆူလာပါက မူလက ချန်ထားသော ဖက်ဖယ်ရွက် ၊ ရှမ်းနံနံ ၊ ပင်စိမ်းရွက်များ ထပ်အုပ်ကာ ငါးချဉ်စပ်ဟင်းတစ်ခွက်ကို အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒါကတော့ ခင်ဇော်နည်း။ အတော်စံနစ်မကျလည်း သည်းခံကြလော့။
ဟိုတခါ တဂျီး မစားဖူးဘူးပြောလို့ ချက်နည်းပေးမယ် ဆိုပြီး မေ့နေတာ။
ပုဇွန်ထုတ်ကို ကျနော်က ခေါင်းရော လက်တွေပါ အခွံသင်လိုက်တယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ /နီ/ဂျင်း နဲ့ ငရုတ်သီးခြောက်ထောင်းပြီး ဆီသတ်ပါ။
ဆီသတ်ထားသည့်ကြက်သွန် အနံမွှေးလာလျှင် ပုဇွန်ထည့်ချက်ပါ။
ပုဇွန်ကထွက်တဲ့ရေ မခမ်းခင် ပင်စိမ်းနုတ်နုတ်စဉ်းပြီးအုပ်ထား အရသာမြည်းပါ။
နောက်တစ်မျိုးက ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ချက်ချင်ရင် ဆီသတ်ဖို့ထဲ ငရုတ်သီးခြောက် ထောင်းမထည့်ပဲ ဟင်းအိုးချခါနီးမှ ငရုတ်သီးစိမ်းခွဲထည့်ရုံပဲ။
တခြားပင်စိမ်း ဟင်းချက်နည်းလေးတွေသိရင် ပြောသွားကြအူးနော်။
ပင်စိမ်း ဘယ်နှစ်မျိုးဆိုလား ကိုကိုကျောက် ရှင်းပြဖူးသတော့။
မှန်းပြီး ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို လေထဲထည့်ချက်ကြည့်မယ်.။
ငါး-ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို ( ၃ယောက်စာ)
ချဉ်ပေါင်ရွက် ၅ပင်ကို နွှင်၍ရေဆေးပါ။ ပိုချဉ်လိုလျှင် အညွှန့် အရိုးများပါထည့်ပါ။
ကြက်သွန်နီ(လက်သီးဆုပ်ခန့်အလုံးကြီး) တစိတ်ကို ခပ်ထူထူလှီးထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူဥမွှာ ၄ခုကို ဓါးပြားရိုက်ထားပါ။
ငရုပ်သီးစိမ်း(နီ) ၂တောင့်ကို ဓါးပြားရိုက်ထားပါ။
ငါးပြားလက်၎လုံးခန့် catfish fillet ကို ဆီအနည်းးးးငယ်ထည့်၍ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူ ကြော်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူအရောင်ပြောင်းလာလျှင် ခရမ်းချဉ်သီး၊ စိမ်းစားငပိ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း(နီ) ။ ကြက်သွန်နီ တို့ထည့်မွှေပါ။
၂မိနစ်ခန့်နေလျှင် ချဉ်ပေါင်ရွက်များပစ်ထည့်ပါ။ နွမ်းသွားလျှင် သောက်ရေသန့် ၂ဗူးထည့်၍ ပွက်ပွက်ဆူသည်အထိ တည်ပါ။
တက်လာသော အမြှုပ်တချို့ဆယ်ပြီးနောက် ပင်စိမ်း ၃ညွှန့်ထည့်ခါ နောက်တမိနစ်နေလျှင် မီးပိတ် အိုးမှချ၍ စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
အိန္ဒိယသားတွေလည်း ချဉ်ပေါင်ဟင်းချိုရှိသဗျ..။ သူတို့က.. မကျည်းသီးဖျော်ရည်ပါထည့်တယ်။
A Healthy Appetizing Soup Made From Pulicha Keera
SERVES:2PREP TIME:5 MINS + COOK TIME: 25 MINS
1 cup pulicha keerai (gongura)2big onions (chopped)3green chillies (chopped)3Tomatoes (chopped) 1/4 cup coriander leaves 1/2 teaspoon turmeric powder2teaspoon jeera salt (as needed)3garlic pods
Wash the separated keerai leaves and drain the water completely. Keep them aside. Chop the onions, green chillies and tomatoes. Grind garlic and jeera toasmooth paste. Inavessel, boil the leaves in sufficient amount of water. Add salt and coriander leaves to it. After few minutes, add onions, tomatoes and green chillies to the keerai. Then add garlic – jeera paste and turmeric powder to the boiling keerai and mix well. Remove the vessel from the flame when you getanice aroma. Stir well and serve warm.
You can follow this procedure for any keerai of your choice. You may adjust pepper and salt as per your taste for this soup.
ချက်နည်းတွေ မှတ်ထားပြီလေ။ ယောကျာ်း ရရင် ချက်ကျွေးဖို့။ အဲလေ. . .
မိန်းမရရင် ကိုယ့်မိန်းမကို ချက်ကျွေးခိုင်းဖို့။
ပငင်စိမ်းကိုတော့ ကြိုက်တယ် အဲ့အနံ့ကိုလည်းကြိုက်တယ်။
ပင်စိမ်းနံ့တော့ မခံနိုင်ဘူး။ ဖျော်ရည်တွေဘာတွေမှာပါရင်တော့ ဖယ်ပြီးသောက်ကြည့်ဖူးတယ်။
မြန်မာပင်စိမ်းနဲ့ ထိုင်းပင်စိမ်း (ga pow) က အမျိုးပဲတော်တာ မတူ…
ထိုင်းပင်စိမ်းက အရွက်နုတယ် ရိုးတံစိမ်းတယ် ၊ မြန်မာပင်စိမ်းက ရိုးတံနီ…
သိသာတာတော့ ဆီသတ်ပြီးကြာကြာထားရင် မြန်မာပင်စိမ်းက သက်သွားတယ်…
မြန်မာပင်စိမ်းမျိုးကို အသုတ် ၊ အပြုတ်တွေနဲ့ တွဲစားတယ်…
ဟင်းကျက်မှ အပေါ်ကအနံ့အနေနဲ့အုပ်တယ် …
မြန်မာ ထိုင်း ဗီယက်နမ် လာအို ခမာ ဟင်းတွေအတော်များများမှာ သုံး၏…